The Ab Presents Nepal » अन्ततः डोजर चलाइएको रंगशालाको बार ठड्याए चितवनबासीले!
अन्ततः डोजर चलाइएको रंगशालाको बार ठड्याए चितवनबासीले!
चितवन: डोजर चलाएर भत्काइएको निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बार चितवनबासीले ठड्याएसँगै आजबाट धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले काम सुचारु गर्ने भएको छ ।
रंगशाला निर्माणस्थलमा जम्मा भएका स्थानीय, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, पेसाकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसहितको समूहले बार ठड्याएका हुन् । भत्किएको बार ठड्याइएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले दोषीलाई कडा कारबाही गर्दै रंगशाला निर्माणका लागि सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्ने बताए ।
केही उछृङ्खल व्यक्तिका कारण रंगशाला निर्माणको काम रोक्न नहुने भन्दै रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । निर्माणाधीन रंगशाला भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ र १६ को सिमानामा पर्छ । रंगशाला निर्माणमा अवरोध पु¥याउनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने तथा रंगशालाको बार भत्काउनेले बनाउनुपर्ने भन्दै ¥याली समेत निकालिएको थियो । केही व्यक्तिले जेठ १५ गते डोजर चलाएर बार भत्काइएको थियो ।
स्थानीयले बार ठड्याएसँगै फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले भने, ‘आम नेपालीको सपनासँग जोडिएको यो रंगशाला निर्माणमा अवरोध नगर्नुस्, आज देखि हामी काम शुचारु गर्छौं ।’ रंगशालाको बार भत्काइएपछि बार नबनुञ्जेलसम्म कान नगर्ने भन्दै फाउण्डेसनका कर्मचारी र कामदारले रंगशाला निर्माणको काम ठप्प पारेका थिए ।